भारतीय प्रहरी जासुसी गर्न खुलेयाम कसरी पुग्यो तातोपानी नाका ? – ZoomNP
भारतीय प्रहरी जासुसी गर्न खुलेयाम कसरी पुग्यो तातोपानी नाका ? प्रकाशित मिति: सोमवार, मंसिर ०६, २०७३ समय - १९:१२:२७ भैरहवा, ६ मंसिर । कागजपत्र र नम्बर प्लेट नभएको एउटा भारतीय कार एक हप्तासम्म नेपाल घुमेर निर्वाध रूपमा भारत छिरेको छ । तीन जना सवार उक्त कार जनकपुरको जयनगर नाकाबाट छिरेर राजधानी काठमाडौं, पोखरा, मनकामना, तातोपानी, चितवन, रूपन्देही हँुदै आइतबार बिहान बेलहिया नाका पार गरेको हो ।
कारमा सवार तीनजना सव–इन्सपेक्टरको कमाण्डमा रहेको भारतीय प्रहरी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाले जनाएको छ । तर उनीहरू कुन उद्देश्यले नेपाल आए ? तातोपानीसम्म पुगेर के गरे ? उनीहरूको नाम के थियो भन्नेबारे इप्रका बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक रविन विष्टले अज्ञानता प्रकट गरे ।
नेपाली सुरक्षाकर्मी र भन्सार विभागको लापरबाहीका कारण कुनै पनि प्रमाण नबोकी जनकपुरको जयनगर भन्सार कार्यालयबाट नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय कार राजधानी काठमाडाैं र नेपाल–चीन सीमानाका तातोपानी पुगेर भैरहवा भन्सार नाकाबाट स्वदेश फर्किएको हो ।
बिना कागजात र नेपाली भू–भाग उपयोग गर्न पाउने भन्सार कागजात बिनै उक्त कार नेपालका मुख्य शहरहरू घुमेर स्वेदश फर्किँदा पनि नेपाली सुरक्षा निकायले चेकजाँच नगर्नु शंकाको विषय बनेको छ । उक्त कार नेपाली सुरक्षा अधिकारीको मिलेमतोमा नेपाल आयो या उनीहरूको आँखा छलेर भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । तर स्थानीय सुरक्षा अधिकारीको प्रतिक्रिया र हेलचेक्राई हेर्दा उक्त कार सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा योजनाबद्ध रूपमा नेपाल आएको पाइन्छ ।
केही दिन अगाडि जयनगर भन्सारबाट नेपाल प्रवेश गरेको उक्त कार शनिबार नेपालका मुख्य शहर तथा नेपाल–चीन सीमा नाका तातोपानी पुगी भैरहवा भन्सार कार्यालय आएको हो । राती १० बजे भैरहवा आइपुगेको उनीहरू भन्सार बन्द भएका कारण शनिबार राति बेलहियामा बसेका थिए । कार आइतबार बिहान नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भैरहवा भन्सार कार्यालयको मिलेमतोमा सीमा पार गराइएको छ ।
इप्रका बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक रविन विष्ट
इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक विष्टको आग्रहमा भैरहवा भन्सार कार्यालयले उक्त कारलाई सीमा पार जान अनुमति दिएको भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहियाका भन्सार अधिकृत गणेश अर्यालले बताए । उनले भने– हामीले बुझ्दा उक्त कारका चालकसहित तीन जना सवार गाडीको नेपाली भू–भाग प्रयोग गर्ने कुनै अनुमति थिएन, कारको कागजपत्र पनि केही थिएन, उनीहरूले हामी भारतको महाराष्ट्रको प्रहरी हौं भनेपछि मैले इप्रका बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक रविन विष्टको आग्रहमा सीमापारी जान अनुमती दिएको हुँ ।
यता इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक विष्टले महाराष्ट्रका पुलिसको आइडी कार्ड देखाएर आफूहरू भुलबस नेपाल आएको बताएपछि उनीहरूलाई छाडेको बताए । उनले भने– म एक वर्ष भारतको विभिन्न ठाउँमा तालिम गरेको प्रहरी हुँ, सीमा क्षेत्रमा यस्ता घटना सामान्य हुन् । उनीहरू केही बुझ्न आएका थिए होला । भारतमा तालिम गर्ने क्रममा मेरा पनि थुप्रै साथीहरू थिए, साथीभाई र आफ्नो सम्बन्धका कारण पनि उनीहरूलाई छाडेको हुँ ।
विष्टको भनाईप्रति बेलहिया गाउँ समाजका पूर्व अध्यक्ष अर्जुन गिरीले भने असहमति जनाएका छन् । उनले नेपाल सरकारको बर्दी लगाई जनताले तिरेको करबाट तलब खाने एउटा सरकारी अधिकृतले आफूले व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण कुनै प्रमाण विना नेपालमा आएको भारतीय जासुसीहरूको समूहलाई छाड्नु नेपाली सुरक्षा निकाय र नेपाल सरकारको बिरुद्ध भएको बताए ।
गिरीका अनुससार शनिबार राती भन्सार पार गर्न लागेको उक्त कारलाई उनकै आग्रहमा प्रहरीले रोकेको थियो । उनले राजस्व गस्ती एवं भन्सार गुल्म भैरहवाका प्रमुख डिएसपी सहितको टोलीलाई खबर गर्दा सुरक्षा निकाय गंभीर नहुनु लाजमर्दो भएको बताए । उनले भने– कारमा विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार, लागूऔषध अथवा अरू केही थियो की भनेर पनि भन्सारका कर्मचारी, सीक्षा सुरक्षा बल, राजस्व गुल्म र इप्रकाले चेकजाँच पनि गरेनन् । यो के कानून संगत छ ?, उनले प्रश्न गरे । गिरीले कारमा सबार ती व्यक्तिहरूलाई आफूले सोधखोज गर्दा उनीहरूले नेपालका अधिकांश शहर घुमी तातोपानीसम्म पुगेर फर्किएको र आफूहरूसँग कुनै कागजपत्र नभएको बताएका थिए ।